कलिउडको कोपमा कला - यात्रा सन्दर्भ - साप्ताहिक
कलिउडको कोपमा कला
कवि विप्लव प्रतीक भन्छन्— अहिले साहित्य, संगीत र कला कलियुगको कोपमा परेको छ ।
उनी जे भन्छन्, नबुझी केही भन्दैनन् । उनका अक्सर रचना कालजयी हुन्छन्, कथा होस् वा काव्य । उनका रचनाबाटै थाहा हुन्छ, उनको मनमा गहिरो पीडा छ । त्यो पीडा नै हो संवेदना । त्यो पीडा नै हो वर्तमान जीवनको प्रतिविम्व ।
केही दिनअघि उनको एउटा गीत सार्वजनिक भयो । मण्डला थिएटरमा त्यो दिन जति मानिस आए तिनले गीतका बारेमा थाहा पाए । उनीहरूले गीतको बोल, त्यसमा सन्निहित करुणा, गहिरो संगीत र दीप श्रेष्ठको कालजयी स्वरका बारेमा केही थाहा पाएनन् । त्यस दिन विप्लव र दीप आफ्ना भावनाको निकै उँचो उडानमा थिए । उनीहरूले समय बितेको चालै पाएनन् । त्यहाँ जो उपस्थित थिए, तिनले पनि चाल पाएनन् कि समय बितिसकेछ । उक्त गीतको प्रसंगमा दीप भन्छन्, ‘मानिस ३:३० देखि ४ मिनटसम्मको गीतसँग रमाउँछ । त्यसपछि उक्ताउँछ ।’
गीतकार विप्लवले भने दुईवटा लामा गीत लेखिसकेका छन् । दीपले ती दुवै गीत गाइसकेका छन् । ‘हररात सपनीमा ऐंठन हुन्छ,’ विप्लवको यो सुपर हिट गीतको लम्बाइ ६ मिनेट छ । अहिलेको गीत ‘हिम प्रदेशसँग एकालाप’ को सांगीतिक लम्बाइ १३:३२ मिनेट छ । विप्लवको यो गीत वास्तवमा कविताको रूपमा लेखिएको थियो । लेख्दालेख्दै उनको मुड काव्यात्मक हुन पुग्यो ।
कविताले गीतको आकार ग्रहण गर्‍यो । दीप श्रेष्ठले त्यो गीतलाई चार अन्तरा र एक स्थायीमा विभाजित गरे । त्यसपछि एउटा दामी गीतको जन्म भयो । यो गीतको निर्माणमा ६ महिना लाग्यो । यति मेहनत गरे पनि सबैको कानमा पुग्ने हिसाबले गीत गुन्जिन सकेको छैन । दीप र विप्लवको त्यस्तो कुनै कम्पनी पनि छैन, जसले यो गीतलाई तत्काल नेपाली संगीत बजारमा ल्याओस् ।
विप्लवको यो गीत स्व:स्फूर्त लेखन थिएन । उनीसँग केही गतिशील स्केचहरू थिए । केही विम्बहरू थिए चलायमान । ती स्केच र विम्बहरूको आधारमा लेख्ने मुड चलेपछि उनी कलम चलाउन थाले । विप्लव नास्तिक होइनन् भने आस्तिक पनि होइनन् । नास्तिक भएको भए उनले यसलाई आत्मिक हिसाबले हेर्ने थिएनन् । विप्लवको यो कविता प्रकृतिसँगको वार्तालाप हो । यो वार्तालापमा उनले ईश्वरीय सत्तालाई चुनौती दिएका थिए । पछि उनले त्यसलाई गीतात्मक आकार दिए ।
विप्लवले विनम्रतापूर्वक आफ्नो ‘मन्द बुद्धि’ ले जे जानेको हो त्यही हिसाबले गीतको रचना गरेको बताए । दीपले विप्लवको त्यो वक्तव्यलाई नकार्दै उनको श्रेष्ठ बुद्धिको प्रशंसा गरे । दीपले बताए, ‘गीतमा नारी स्वरको संयोजनको सम्भावना थियो । नारी पात्र भिजनमा मात्र देखिएको छ । कालो परिधानमा देखिने नारी पात्रको प्रयोग सम्भव थियो, तर हामीसँग समय थिएन । त्यसैले हामीले त्यो अप्सन रोजेनौं ।’
विप्लव भन्दै थिए, ‘यो गीतको जन्म संयोगले भएको हो । हाम्रो समाजमा विवेकको चरम अभाव हुँदै गएको छ । यो अवस्थामा यो गीतले श्रोताहरूबाट ‘वाहवाही’ पायो भने पनि त्यसलाई आधिकारिक हो कि होइन ? जाँच्नैपर्छ । जबसम्म मानिसमा चेतना आउँदैन तबसम्म कला, साहित्य र संगीतको विकास हुन सक्दैन । हामी अहिले कालको अधिकतम संक्रमणमा छौं । यस्तो बेला स्वाभाविकताको खोजी अप्रासंगिक हुन्छ ।’
प्रतीक्षाको लामो सुरुङबाट
म आएको छु तिमीकहाँ,
भनन्, तिमी कसको प्रतीक्षामा ?
तिमीभित्र रोमाञ्च छ, तिमीमा छ मोहक सुन्दरता
तिमीभित्रै छ उन्माद, तिमीमा छ ईष्र्याको उद्गम पनि
प्रकृतिको ए अनुपम कृति, भन न, तिमी कसको प्रतीक्षामा ?
तिम्रो संसारमा आरोह छ, छ अवरोह पनि,
त्यहाँ गति छ र स्थिर छ गति पनि
आश, प्यास र खोजी पनि त्यहीँ,
भन न, तिमी कसको प्रतीक्षामा ?
भन्छन्, आशमा अल्झेको छ जीवन,
सपनै नरहे रहन्न रे जीवन
तर भ्रम हो रे सपना, र मिथ्या हो रे जीवन
जन्म र मृत्युको भेदबाट अलग
हार र जितको महसुसबाट फरक
आँसु र हाँसोको दुनियाँबाट भिन्न
आशा र निराशाबाट निश्चिन्त
-कवि विप्लव प्रतीक